Exclusive News , Banksnepal
Category/exclusive-news-np (Total Articles : 729 )
﻿काठमाडौं । हिमालयन बैंकबाट सेवा निबृत्त (अवकाश पाएका) २१ जना कर्मचारीलाई भव्य रुपमा बिदाई तथा सम्मान गरिएको छ। हिमालयन बैंक कर्मचारी संगठनद्वारा आयोजित सो कार्यक्रममा उनीहरुलाई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले एक कार्यक्रमबीच बिदाइ तथा सम्मान गरेका हुन् । विगत ४ वर्षयता बैंकबाट अवकाश...
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसपालीदेखि असर्फी छाप्ने भएको छ । दुई वर्षदेखि रोकिएको असर्फी छाप्ने कार्यको तयारी करिब पूरा भएको छ ।
डलर सटहीमा राष्ट्र बैंकको कडाई मौखिक मात्रडलर सटहीमा प्रतिव्यक्ति १ हजार ५ सय अमेरिकी डलर नै सटही गर्न पाउने तर बैंकहरुले २ सय डलर मात्र साट्न पाइने किन भन्छन् ?काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटहीमा कडाइ गर्न थालेको छ । शोधनान्तर...
काठमाडौं । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको दसैँका विभिन्न साइत सार्वजनिक गरेको छ । टीका लगाउनेका लागि बिहान १०:०२ बजेको साइत शुभ रहेको छ । टीका लगाउने मानिस पूर्वफर्कनुपर्ने समितिले जनाएको छ । त्यस दिनदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म दुर्गा भवानीको प्रसाद लगाउन सकिन्छ ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.३५ प्रतिशत रहेको जनाएको...
जब बजारमा नगद नै छैन भने शेयर बजारमा कहाँबाट लगानी हुने ?बजार घट्नुमा मुख्य कारण भनेको असोज १ गते देखी लागु हुने गरी सबैजसो बैंकहरुले बढेको ब्याजदर पनि हो। अब शेयर बजारबाट पैसा झिकेर बरु तीन महिना भए पनि मुद्दती...
यसपालीको दशैंमा नयाँ नोट साट्न पुरानो नोट दिएर यसरी सजिलै साट्न सकिने
काठमाडौं । असोज ४ गतेदेखि नयाँ नोट सटही सुरु भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैं तिहारलाई लक्षित गर्दै भोलिदेखि नयाँ नोट सटही गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।नेपाल राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले दशैं तिहारलाई लक्षित...
एकैदिनमा ११४ अंकले शेयर बजारमा पहिरो किन गयो ?
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) साताको कारोबारको पहिलो दिन सोमबार उच्च अंकले घटेको छ । लगातार तीन दिनको बन्दपछि खुलेको शेयर बजार सुरुवात देखिनै गिरावट देखिएको थियो । नेप्से ११४.०२ अंकले घटेर दुई हजार ६ सय ९८ दशमलब २५ विन्दुमा...
यसपालीको दशैंमा पुरानो नोट दिएर नयाँ नोट साट्न सक्ने
काठमाडौं । असोज ४ गतेदेखि नयाँ नोट सटही सुरु हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैं तिहारलाई लक्षित गर्दै भोलिदेखि नयाँ नोट सटही गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
बाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको व्याजदर २ प्रतिशतसम्म बढाए, कुन बैकको कति ?
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरि निक्षेप र कर्जा दुबैको व्याजदर बढाएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले साधारण बचत,मुद्दती र कर्जा पनि व्याजदर बढाएका हुन् ।वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशतदेखि ३ प्रतिशतबढीले ब्याजदर बढाएर दोहोरो...
दसैंका लागि नयाँ नोट असोज ०४ देखी सटही गर्न मिल्ने
बडा दसैं र हाल चलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिमलाई मध्यनजर...
यसपाली दशैंमा नयाँ नोट साट्न पाइन्छ ! राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट वित्तीय संस्थालाई पठाउदै
काठमाडौं । दशैंका लागि नयाँ नोट सटही कार्य सुरु नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सह प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद पोखरेलले बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत अहिलेसम्म नयाँ नोट वितरण नगरिएको स्पष्ट पारे । उनले नयाँ नोट बाँड्नेबारे राष्ट्र बैंक आन्तरिक...
अध्यादेशले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन : १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको संशोधित बजेट ( पूर्ण विवरण सहित )
काठमाडौं , सरकारले बजेट अध्यादेशले ल्याएको बजेट अंकलाई परिमार्जन गर्दै सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन...
नेप्सेमा ३४ कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का, १४८ वटा कम्पनीलाई सूचीबाटै हटाइयो किन ?
काठमाडौं । दोश्रो बजारमा हाल ३४ कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का रहेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)ले सूचीकृत कम्पनीमध्ये हाल ३४ कम्पनीको सेयर...
अब कुन–कुनको आउँदैछ हकप्रद ? २ डेभलपमेन्ट बैंक, १ फाइनान्स कम्पनी, १ जलविद्युत् कम्पनी र २ बिमा कम्पनी
केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जर–एक्विजिसनमा प्रोत्साहन गर्न हकप्रद सेयरमा कडाई गरेको छ । अजोड इन्सुरेन्सले हकप्रद सेयरलाई लिएर सेयर बजारमा इन्साइडर ट्रेडिङ गरेसँगै बिमा कम्पनीहरुको हकप्रद सेयर निष्कासनलाई पनि बिमा समितिले कडाईं गरेको छ । तथापि, अहिले हकप्रद सेयर निष्कासन अनुमति मागेको शिखर इन्सुरेन्स र...
1 year ago 9547 views